Qual è il peccato di fornicazione? | Ilblogdellafede
Gịnị bụ mmehie ịkwa iko?
Site n'oge ruo n'oge, enwere ọtụtụ ihe anyị ga-achọ ka Bible kwuo banyere gị karịa ka ọ na-ekwu. Iji maa atụ, n’ime baptism anyị kwesịrị ịrara mmiri ma ọ bụ fesaa ya, ụmụ nwanyị nwere ike ịka nká, ebe nwunye nwanyị si, ebe nkịta niile ga-aga eluigwe, na ndị ọzọ? Ọ bụ ezie na ụfọdụ akụkụ Akwụkwọ Nsọ na-ahapụ obere ohere maka ịkọwa karịa ọtụtụ n'ime anyị nwere ntụsara ahụ, enwere ọtụtụ ebe ndị ọzọ ebe Akwụkwọ Nsọ na-edozighi anya. Ihe ịkwa iko bụ na ihe Chukwu n’uche banyere ya bụ ihe n’enweghị ike inwe obi abụọ banyere ọnọdụ Akwụkwọ Nsọ.
Paul egbughikwa okwu ọ bụla mgbe ọ sịrị, "Tụlee akụkụ ahụ nke ụwa gị dị ka ndị nwụrụ anwụ site n'omume rụrụ arụ, adịghị ọcha, agụụ, na ọchịchọ ọjọọ na anyaukwu nke ikpere arụsị" (Ndị Kọlọsi 3: 5), na onye edemede Hibru dọrọ aka ná ntị: "Alụmdi na nwunye ekwesiri ime ya dika nsọpuru bayere madu nile, ihe-ima-nma nke nwunye a, aghaghi imeru ya: n'ihi na ndi-iko na ndi nākwa iko ka Chineke g judgekpe ikpe ”(Ndi Hibru 13: 4). Okwu ndị a apụtachaghị na ọdịbendị anyị dị ugbu a ebe ụkpụrụ gbanyere mkpọrọgwụ n'ụkpụrụ ọdịbendị ma gbanwee dịka ikuku na-agagharị.
Mana maka anyị ndị nwere ikike Akwụkwọ Nsọ, e nwere ụkpụrụ dị iche maka etu anyị ga-esi mata ihe dị mma na ihe dị mma, na ihe a ga-ama ikpe ma zere. Pọl onyeozi dọrọ ndị ụka Rome aka na ntị ka ha ghara “ime ka ụwa a kwekọọ, kama ka e gbanwee ya site n'ọhụụ nke uche unu” (Ndị Rom 12: 2). Paul ghọtara na usoro nke ụwa a, nke anyị bi na ya ugbu a ka anyị na-eche mmezu nke alaeze nke Kraịst, nwere ụkpụrụ ya nke na-achọ 'ime ka' ihe niile na onye ọ bụla na onyinyo nke onwe ha, ya bụ otu ihe nke Chineke. ọ na - eme kemgbe mmalite nke oge (Ndị Rom 8:29). O nweghikwa oghere ebe a na-ahụ ihe omume a n'ụzọ doro anya karịa ka ọ gbasara ajụjụ gbasara mmekọ nwoke na nwanyị.
Gịnị ka Ndị Kraịst kwesịrị ịma gbasara ịkwa iko?
Akwụkwọ Nsọ agbachighị nkịtị maka ajụjụ gbasara ịkwa iko, ọ hapụghịkwa anyị ka anyị ghọta ihe ịdị ọcha nke mmekọahụ. Churchka Kọrint nwere aha ọma, mana ọbụghị ihe ị ga-achọ ka ụlọ ụka gị bụrụ. Pọl dere wee sị: “A kọwo na e nwere omume rụrụ arụ n'etiti unu, ụdị omume rụrụ arụ nke a na-adịghịdị n'etiti ndị mba ọzọ” (1 Ndị Kọrịnt 5: 1). Okwu Grik eji eme ihe ebea - kariri oge iri abuo ozo n’agba ohu: n’ihi nmebi iwu bu okwu ahu bu por (porneia). Okwu Bekee anyị na-akpali agụụ mmekọahụ si na porneia.
N’ime narị afọ nke anọ, a sụgharịrị Akwụkwọ Nsọ Grik nke Latin n’asụsụ Latin n’ọrụ anyị na-akpọ Vulgate. Na Vulgate, a sụgharịrị okwu Grik, porneia na okwu Latin, ndị na-akwa iko, nke a bụ ebe a na-enweta okwu ịkwa iko. A na-achọta okwu ahụ ịkwa iko na Bible King James, mana ntụgharị ọhụụ na nke ziri ezi, dị ka NASB na ESV, na-ahọrọ ịsụgharị ya na omume rụrụ arụ.
Gịnị ka ịkwa iko gụnyere?
Ọtụtụ ndị ọkà mmụta Bible na-akụzi na ịkwa iko bụ naanị maka inwe mmekọahụ tupu alụmdi na nwunye, ma ọ dịghị ihe dị n'asụsụ mbụ ma ọ bụ n'ụzọ ọzọ na-egosi echiche dị otú ahụ dị warara. Nke a bụ ihe mere ndị ntụgharị ọgbara jiri họrọ ịtụgharị porneia dịka omume rụrụ arụ, n'ọtụtụ oge n'ihi oke ya na ihe ọ pụtara. Akwụkwọ Nsọ apụtaghị n'ụzọ iji kọọ mmehie ụfọdụ n'okpuru aha nke ịkwa iko, anyị ekwesịghịkwa ime.
Ekwere m na ọ dị mma iwere na porneia na-ezo aka na mmekọahụ ọ bụla na-eme na-abụghị mmebe nke alụlụ di na nwunye nke Chukwu, gụnyere, ma ọnweghị ya, ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ, na nwoke na nwanyị inwe mmekọahụ, ma ọ bụ mmemme mmekọahụ ọ bụla na-adịghị asọpụrụ Kraịst. Onyeozi ahụ dọrọ ndị Efesọs aka na ntị na “ekwesịghị kwa ịdị na-akpọ aha omume rụrụ arụ ma ọ bụ adịghị ọcha ọ bụla ma ọ bụ anyaukwu aha n'etiti unu, dị ka o kwesịrị maka ndị nsọ; ọ dighi kwa nzuzu na nzuzu ma ọ bụ okwu njakịrị jọgburu onwe ha, nke na-ekwesịghị ekwesị, kama nke ahụ ikeala ”(Ndị Efesọs 5: 3-4). Ihe onyonyo a na-enye anyi onyinyo nke na-agbasawanye ihe ọ pụtara ịgụnye etu anyị ga-esi agwa ibe anyị okwu.
Ana m amanye m iru eru na nke a anaghị ekwupụta na mmekọahụ na alụmdi na nwunye niile na-asọpụrụ Kraịst. Ama m na ọtụtụ agulighị alụ dị na alụmdi na nwunye na enweghị mgbagha na a gaghị ahapụ ikpe Chineke naanị maka na onye ikpe mara megide di ya.
Olee nsogbu ịkwa iko nwere ike ime?
Ọ bụ ihe mmesi obi ike na chi hụrụ nwunye n'anya ma “kpọọ ịgba alụkwaghịm asị” (Malakaị 2:16), nwere ike ịsị, na-elele nnabata nke ọgbụgba ndụ gbara na ịgba alụkwaghịm. Jizọs na-ekwu na onye ọ bụla nke gbara alụkwaghịm maka ihe ọ bụla “maọbụ ihe kpatara akwụna” (Matiu 5:32 NASB) na-akwa iko, ma ọ bụrụ na mmadụ alụọ onye gbara alụkwaghịm maka ihe ọ bụla ọzọ na-abụghị maka enweghị nghọta ọ na-akwa iko.
Eleghị anya ị ga-atụlerịrị ya, mana okwu nzuzu n'asụsụ Grik bụ otu okwu anyị siri mata dị ka porneias. Okwu ndia bu okwu siri ike nke di iche na echiche ndi ọdịnala anyi n’ebe di na nwunye di na nwunye, kama ha bu okwu Chukwu.
Mmehie nke ịkwa iko (ịkwa iko) nwere ikike ibibi mmekọrịta ahụ Chineke kere iji gosipụta ịhụnanya o nwere n’ebe nwunye ya na di ya nọ, ụka. Paul dụrụ ndị di ọdụ ka ha “hụ nwunye unu n'anya dịka Kraist si hụ nzukọ Kraist n'anya ma nyefee onwe ya maka ya” (Ndị Efesọs 5:25). Ewehiena m, enwere ọtụtụ ihe nwere ike igbu alụm di na nwunye, mana ọ dị ka mmehie ịgha mmekọahụ jọgburu onwe ya ọ bụ nke na-emebi emebi, ma na-emerụkwa ọnya na ọnya dị ukwuu ma mesịa mebie ọgbụgba ndụ ahụ n'ụzọ enweghị ike idozi ya.
Pọl nyere ọgbakọ dị na Kọrịnt ndụmọdụ a na-awụ akpata oyi: “Unu amaghị na ahụ unu bụ akụkụ nke Kraịst. . . ọ bụ na ịmaghị na onye ọ bụla sonyere nwanyị akwụna bụ otu ahụ ya na ya? Nihi na okwuru, “Ha abua gabu otu aru” (1 Ndi Korint 6: 15-16). Ọzọ, nmehie nke omume rụrụ arụ (ịkwa iko) dị obosara karịa ịgba akwụna naanị, mana ụkpụrụ a na-ahụ ebe a nwere ike tinye n'ọrụ n'akụkụ niile nke ịkwa iko. Ahụ m abụghị nke m. Dịka onye na-eso ụzọ Kraịst, aghọrọ m akụkụ nke ahụ ya (1 Ndị Kọrịnt 12: 12-13). Mgbe m mehiere n’ụzọ mmekọahụ, ọ dịka a ga - asị na m dọrọ Kraịst na ahụ ya iso m mee mmehie a.
Nicationkwa-iko yiekwa ka ọ nwere ụzọ isi eweghara mmetụta na echiche nke njigide anyị n'ụzọ jọgburu onwe ya nke ụfọdụ ndị anaghị agbaji ụdọ n'agbụ ha. Onye edemede Hibru dere banyere “mmehie nke na-ekegidekarị anyị” (Ndị Hibru 12: 1). Nke a yiri ihe Pọl bu n’uche mgbe o degaara ndị kwere ekwe n'Efesọs akwụkwọ ozi na “ha anaghị eje ije ebe ndị mba ọzọ na-eje ije na-enweghị isi nke uche ha gbara ọchịchịrị nghọta ha. . . ebe omumu ihe nile,] ghagide n'aru aru dika nmebi-aru nile di nma ”(Ndi Efes] s 4: 17-19). Mmehie nke mmehie na-abanye n’obi anyị ma na-eduga anyị n’agha n’ụzọ ndị anyị anaghị amatakarị ịghọta ruo mgbe oge gafeworo.
Mmehie nwoke na nwanyị nwere ike ịbụ nmehie nzuzo, ma mkpụrụ nke a kụrụ na nzuzo na-amị mkpụrụ na-emebi ihe, na-emebi ọha na eze, na ụka, a na-ekwu okwu, ma na-apụnara ndị kwere ekwe ọ Christụ na nnwere onwe nke mmekọrịta nke Kraịst. Mmehie ọ bụla na-enwe mmekọahụ bụ adịgboroja nke nna ụgha ghaara iji dochie ịhụnanya mbụ anyị, Jizọs Kraịst.
Kedụ ka anyị ga - esi merie mmehie ịkwa iko?
Yabụ kedu ka ị ga esi lụọ ọgụ ma merie n'akụkụ a nke inwe mmekọahụ?
1. Ghọta na ọ bụ uche Chineke ka ndị ya bie ndụ dị ọcha ma dị nsọ ma katọọ ịkwa iko ụdị mmadụ niile (Ndị Efesọs 5; 1 Ndị Kọrịnt 5; 1 Ndị Tesalonaịka 4: 3).
2. Gwa Chineke mmehie gị (1 Jọn 1: 9-10).
3. Kwupụta ma tụkwasịkwa ndị okenye obi tụkwasịrị gị obi (Jems 5:16).
4. Chọọ iweghachi uche gị site n'imejupụta ya na akụkụ Akwụkwọ Nsọ na itinye aka na uche nke Chineke n'onwe ya (Ndị Kọlọsi 3: 1-3, 16).
5. Kpekọ na Kraịst bụ naanị onye nwere ike ịnapụta anyị n’agbụ nke anụ arụ, ekwensu, na ụwa hibere maka ọdịda anyị (Ndị Hibru 12: 2).
Ọbụzị ka m na-ede echiche m, achọpụtara m na maka ndị na-agba ọbara ma na-ebe ume maka ume ọzọ na n'ọgbọ agha, okwu ndị a nwere ike ịtọghe ma bụrụkwa onye a tọhapụrụ site na oke egwu nke ndụ n'ezie mgba maka ịdị nsọ. Onweghi ihe puru ime na ebum n’obi m. Ekwupụtaghị okwu m ịbụ ihe nlere ma ọ bụ usoro dị mfe. M gbalịsiri ike ịnye eziokwu nke Chineke n'ụwa nke ụgha na ekpere ka Chineke gbapụta anyị n'agbụ niile nke jikọtara anyị ka anyị wee hụkwuo ya n'anya.
← Na post gara aga Gara aga post:Ezi ofufe nke ụbọchị: otu esi adị ndụ elekere mbụ nke ụbọchị
Ọzọ Post → Post ozo:Saint Peter Julian Eymard, Saint nke ụbọchị maka Ọgọst 3